Amaqhinga ama-4 wokusebenzisa ngcono i-Gboard kwi-Android | I-Androidsis
I-Gboard ngokukhawuleza iba yikhibhodi eyintandokazi ye-Android kubasebenzisi abaninzi. Isizathu esinye sokuthandwa kwayo kukuba ifike indlela ende kwiinyanga ezidlulileyo, enkosi ngokongezwa kweempawu ezintsha. Kwezi nyanga sifumene imisebenzi enje nge ikhibhodi edadayo okanye ukubanakho yenza eyethu i-Mini Emojis.
Enkosi ngeempawu ezinje, yikhibhodi eyaziwayo kakhulu. Ke ngoko, apha ngezantsi sikubonisa ezinye amaqhinga okufumana okuninzi kwiGboard kwifowuni yakho ye-Android. Ngale ndlela, uya kubona ukuba yikhibhodi enamathuba amaninzi.
Ukongeza, ukuba le khibhodi yeGoogle ayikukholisi, sinazo ezinye iindlela ezikhoyo, okoko utshintsha ikhibhodi kwi-Android yinto elula ngokwenene. Sikushiya nala maqhinga ukuze ufumane okuninzi kwikhibhodi yeGoogle, kwaye uyisebenzise ngokukhawuleza.
1 Yenza izitshixo zibe nkulu
2 Cima isicatshulwa ngokuslayida ikhusi
3 Ukuyalelwa kwelizwi
4 Hambisa ikhibhodi
Yenza izitshixo zibe nkulu
Enye yezinto ezikhathaza abaninzi malunga neGboard kukuba amaqhosha mancinciMna ngokobuqu bendinobunzima bokuqhela. Kodwa inyani kukuba sinethuba lokuyiguqula le nto kwaye sizenze izitshixo zibe nkulu. Ke ukusetyenziswa kwayo kuya kuba lula ngakumbi kuthi. Ukwenza oku, kufuneka singene kuseto lwebhodi yezitshixo kunye nokukhetha ukhetho.
Ngaphakathi kwayo sifumana ukhetho ekuthiwa bubude. Kule ndlela sinomgca, apho sinokuncinci kwaye sininzi kwisiphelo ngasinye. Into ekufuneka siyenzile kukutyibilika kakhulu, ukuze oonobumba bazakuba bakhulu. Ukubhalela kwiGboard kuya kuba lula kakhulu.
Cima isicatshulwa ngokuslayida ikhusi
Icebo eliluncedo kakhulu lokufumana okuninzi kwikhibhodi. Enkosi ngayo, xa sibhala isicatshulwa, siya kuba nakho ukukhetha kwaye cima inxenye yayo usebenzisa umqondiso olula. Ke siyonga ixesha, ukongeza ekwenzeni kube lula kuthi ngalo lonke ixesha. Kwaye indlela yokwenza kusebenze kulula kakhulu.
Siya kuseto lweGboard kwaye apho singena kwicandelo lokubhala ngokushenxisa umnwe wethu. Kuya kufuneka sisebenzise i ukhetho olubizwa "vumela ukucima ngezandla". Ngale ndlela, xa sikhetha isicatshulwa, ukusicima, kuya kufuneka sityibilize umnwe wethu, ukuqala kwiqhosha lokucima. Inokuba ingaqhelekanga ekuqaleni, kodwa kukuziqhelanisa nokusebenzisa eli qhinga.
Kutheni ubhala xa sinokuyalela? I-Gboard isinika ithuba lokusebenzisa ukuyalelwa kwelizwi, ukuze nje sikwazi ukuthetha kwaye imiyalezo yethu iya kubhalwa. Lo msebenzi uphuculwe kutshanje, kuba ngoku sinako Sebenzisa ngaphandle konxibelelwano lwe-Intanethi. Indlela yokwenza isebenze ilula, njengesiqhelo, kuseto lwebhodi yezitshixo.
Ngaphakathi kuseto siya kwilizwi lokuyalela. Apho kufuneka siqiniseke ukuba sinezichazi-magama esifuna ukuzisebenzisa, kwakhona ngaphandle kweintanethi. Nokuba sisiSpanish, isiNgesi okanye ulwimi onxibelelana ngalo rhoqo nabanye abantu. Xa sinazo, siyaphuma emva koko singenise ukhetho. Kuzo kufuneka sisebenzise isitshixo sokufaka ilizwi.
Ngale ndlela, ngoku siya kuba nakho ukusebenzisa ukubizela ngelizwi kwiGboard. Umsebenzi esiza kukwazi ukuwusebenzisa nokuba sinonxibelelwano lwe-Intanethi okanye akunjalo. Into ngokungathandabuzekiyo iyeyona ikhululekileyo, ngakumbi ukuba sifuna ukuthatha amanqaku sisebenzisa lo msebenzi wokuyalela ikhibhodi.
Kunokubakho abasebenzisi apho indawo yebhodi yezitshixo yeGboard ingakhululekanga ngokupheleleyo. Kuxhomekeka kubungakanani bescreen sakho, kodwa sinethuba lokuhambisa ikhibhodi, ukongeza kwi Umsebenzi webhodi yezitshixo odadayo sele ukhankanyiwe kwiapp. Ke uya kuba kwimeko efanelekileyo kuthi.
Kule meko, into ekufuneka siyenzile kukubamba iqhosha lokungena, ezantsi ngasekunene. I-icon iya kuthi emva koko ivele, sihambisa umnwe wethu kuyo. Iimpawu ezintathu zivela ngokulandelayo, ngelixa ikhibhodi iyenziwe nkulu. Kufuneka ucofe i icon engezantsi. Apho, ujongano olutsha luya kuvela apho singayihambisa ikhibhodi ukuya kwinqanaba kwiscreen esikhethileyo, ukongeza ekuguquleni ubungakanani bayo. Le yindlela esiyihlengahlengisa ngayo iGboard kwindlela esithanda ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Amaqhinga okufumana okuninzi kwiGboard kwi-Android